အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: လယ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်သူများ ခုချက်ချင်းလွှတ်ပေး
ဦးဝင်းချိုနှင့် ကိုရန်ပိုင်စိုး တို့အား ၅၀၅/ခ နှင် ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် ဖမ်းဆီးထား၍ ယနေ့ နေ့လည်ခန့် က ကြိုတင်ကြေညာထားခြင်းမရှိပဲ လက်ထိပ်ခတ်၍ ပဲခူးမြို့နယ်တရားရုံးသို့ အရေးပေါ် ရုံးထုတ်ခဲ့ပါသည်။
ဦးဝင်ချို ၏ နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀န်းမှကြိုတင် မသိရှိခဲ့သောကြောင့် လာရောက်ရန် ပျက်ကွက် ခဲ့သော်လည်း ဦးဝင်ချိုနှင့် လယ်သမားများအား လာရောက်အားပေးသော လူထုမှ လက်ခုပ်တီး ၍ ထောက်ခံကြပါသည်။
လာရောက်အားပေးကြသော ပရိတ်သတ် ၁၀၀ ခန့်ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းသိရှိရပါသည်။
တဦးကို ၅ မိနစ်ခန့်စီ စစ်ချက်ယူ၍ ၅. ၉. ၂၀၁၃ ရုံးပြန်ချိန်းပါသည်။ ဖမ်းဆီးခံရသူထဲ တွင် လယ်သမား သုံးဦးပါဝင်သည်၊ အဆိုပါလယ်သမားများကို ၅၀၅/ခ နှင့် ဖမ်းထားခြင်းမှာ သင့်လျော်မူ မရှိကြောင်း ရှေ့နေများအသိုင်းအ၀န်းမှ ဝေဖန်လျက်ရှိနေကြသည် ကို သတင်းရရှိပါသည်။
လယ်သမားအရေးဆောင်ရွက်သူ ဦးဝင်းချို ၊ရန်ပိုင်စိုး နှင် လယ်သမား လေးဦးကို ၅၀၅/ခ ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားပါသည်။ ၁၃ ရက်နေတွင် ပဲခူးတရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့၉.၂.၂၀.၂၀၁၃ ရက်နေတွင် မိသားစု နှင့်တွေဆုံခွင့်ပေးပါမည်။ပဲခူးအကျဉ်းထောင်တွင် ယနေ့ ၈နာရီမှ ၁၁နာရီအတွင်းတွေ့ ဆုံခွင့်ရမည်ဖြစ်ပါသည် ။ ဦးဝင်းချို ၏ မိတ်ဆွေများ သွားရောက်တွေ့ဆုံနိုင်ရန် တင်ပြလိုက်ပါသည်။ သတင်းရင်းမြစ်မှာ ဦးဝင်ချို၏ဖုန်းကို ယာယီကိုင်ထားသူ ကိုမောင်မောင် ၀၉၇၃၂၀၆၈၃၈ ထံမှဖြစ်ပါသည်။ ဦးဝင်ချိုနှင့် လယ်သမားများလွတ်မြောက်ရေးသည် အပြင်တွင် ကျန်ရှိနေကြသော ကျနော်တို့ အားလုံး၏ တာဝန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဦးဝင်းချိုနဲ့ ကျွန်တော် စတင်ရင်းနှီးသိကျွမ်းခဲ့ခြင်းက ဦးဝင်းချို ၊ ကိုဝေဠု ၊ ဦးနေမျိုးဝေ ၊ ဒေါ်ဘောက်ဂျာ နှင့် ကိုအောင်မျိုးဦး အပါအ၀င် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့် ဥပဒေရေးစွဲပေးဖို့ စတင်လှုပ်ရှားကြစဉ်က ဖြစ်ပါတယ်။ သူနေ ထိုင်ရာ ဒဂုံမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှာ ဆန္ဒပြဖို့ ခွင့်သွားတောင်းကြပါတယ်။ ရဲစခန်းက ခွင့်ပြုပေးဖို့ ဥပဒေမရှိ သေးဘူးလို့ ပြောတဲ့အခါမှာ မရှိသေးရင် ဥပဒေရေးစွဲပါ။ ဥပဒေမရေးစွဲရင် ဥပဒေရေးစွဲပေးရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော် မယ်ဆိုပြီး သွားရောက်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော် မီဒီယာအနေနဲ့ သွားရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး သူတို့အချင်း ချင်း တိုင်ပင်တဲ့ကိစ္စကို သွားရောက် သတင်းရယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဝင်းချို နှင့် လယ်သမား(၆)ယောက်ကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) တပ်ပြီး ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြားပြီး အတော် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
Posted by Wai Lin Aung at 2:51 AM